Wasiirka gaashaandhigga Jabuuti oo Beledweyne gaaray
Wafdi uu hoggaaminaayo wasiirka gaashaandhigga dalka Jabuuti Cabdulqaadir Maxamed Kaamil ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxayna kulan la qaateen mas’uuliyiinta gobolka.
Kulanka wasiirka iyo madaxda maamulka ayaa looga hadlay arrimaha ammaanka, xiriirka ka dhexeeyo ciidamada Jabuuti ee qeybta ka ah kuwa AMISOM ee Beledweyne jooga iyo xubnaha maamulka iyo sidii loo xoojin lahaa wada-shaqeynta u dhexeysa.
Wafdiga wasiirka waxa ku jira taliyaha ciidamada nabad-sugidda Jabuuti Xasan Saciid iyo abaanduulaha ciidamada dalkaasi Sakariye Sheekh Ibraahim, sida uu Bar-kulan u sheegay taliyaha ciidamada AMISOM ee gobolka Hiiraan Cusmaan Dubbad.
Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa kormeeray xeryaha iyo saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, taasoo ay ugu kuurgalayeen xaaladda ciidamada iyo howlaha ay hayaan.
Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Jabuuti Jeneraal Zakariye Sheekh Iibraahim oo wafdiga qeyb ka ah ayaa xilli uu la hadlayay ciidamada dowladda ee ku jira xerada tababarka ee Hiil ayaa sheegay in dowladda Jabuuti ay ciidamadeeda sii joogi doonaan Soomaaliya inta ay ka dhalaneyso nabad buuxda.
Ciidamada Jabuuti ayaa qeyb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, waxayna ka howlgalaan magaalada Beledweyne oo ka mid ah magaalooyinkii laga saaray maleeshiyada al-Shabaab.